Umntwana oMnandi O 'Mgodini nguGuns N' Roses - Izinto Zobugcisa
Umntwana oMnandi O 'Mgodini nguGuns N' Roses
Amagama avela kumbongo u-Axl Rose wayesebenza kuwo. Wabhala ingoma malunga nentombi yakhe, u-Erin Everly, intombi kaDon Everly we-Everly Brothers. Emva kokuthandana iminyaka emine, batshata kumtshato okhawulezayo eLas Vegas ngo-Epreli 28, 1990, kodwa kwiinyanga nje ezisithoba kamva, umtshato wapheliswa, kunye nokusoloko bebanga ukuxhatshazwa.
Ukulangazelela Intshabalalo yayiyiGuns N 'Roses' icwecwe lokuqala, elakhutshwa ngoJulayi 1987. Kwathatha ixesha elide ukubamba, kunye neentanda ezintathu kwindawo engatshatanga ngaphambi kokuba yenzeke.
'Kulula kakhulu' yayingowokuqala ongatshatanga, elandelwa ' Wamkelekile kwijangile . ' Zombini zabhabha, kodwa xa 'uMntwana oMnandi O' wam 'wakhutshwa njengowesithathu ongatshatanga ngoJuni 1988, yenyuka inyuka yaya encotsheni, izisa i-albhamu nayo. Ingoma hit # 1 ngoSeptemba; i-albhamu yafikelela kwindawo ephezulu ngo-Agasti. Ekuvukeni kwempumelelo 'yoMntwana oMnandi', 'Wamkelekile kwiJungle' wakhutshwa kwakhona kwaye ngeli xesha waba yinto edumileyo.
U-Slash weza ne-riff xa wayedlala ejikeleze ikatala yakhe. Wayecinga ukuba bubudenge kwaye akafuni kwenza nto, kodwa u-Axl wayeyithanda kwaye wayemenza ukuba ayidlale. U-Izzy Stradlin wongeze ezinye iingoma, kwaye ingoma yahlangana. Ngokwengxelo ka-Duff McKagan ka-2012, uSlash wayehlala eyithatha njengeyona ngoma imbi kakhulu yeGuns N 'Roses.
Slash uxelele Amatye agiqekayo Iphephancwadi: 'Yindibaniselwano yeempembelelo. Ukusuka kuJeff Beck, iCream kunye neZeppelin ukuya kwizinto onokumangaliswa kuzo: ii-solos kwinguqulelo kaManfred Mann ethi 'Blinded by the Light' kunye noGerry Rafferty ' Isitalato iBaker . ''
I-Axl iphulaphule iqela leengoma zikaLynyrd Skynyrd ngaphambi kokurekhoda ilizwi lakhe. Wayelithanda ikhaya labo eliphantsi, isandi sokwenyani kwaye wayefuna ukuliphinda kule ngoma.
U-Axl Rose wayenobuntwana obunzima, kodwa kule ngoma ukhumbula enye ipokotho yokukhanya, ekhumbula iinkumbulo zobuntwana 'apho yonke into yayintsha njengesibhakabhaka esikhanyayo.'
Uxelele i ILos Angeles Times : 'Umgca' wesibhakabhaka esiluhlaza 'yayiyenye yeenkumbulo zam zokuqala zobuntwana - ndijonga isibhakabhaka esiluhlaza kwaye ndinqwenela ukuba ndinyamalale kuyo kuba intle kakhulu.'
Ividiyo yayikhokelwe nguNigel Dick, owenza iividiyo ezintlanu zokuqala zeGuns N 'Roses. Ngokungafaniyo nee-epics zabo zangemva kwe 'Imvula kaNovemba' kwaye 'Sukulila,' umntwana oMnandi u-O 'weVidiyo yam ngumfanekiso omnyama, omnyama nomhlophe webhendi eqhuba le ngoma. Kwakulungile ukubaphumelela iMbasa yeVidiyo yoMculo we-MTV yeVidiyo eQinisekileyo yeSinyithi.
Ivesi yesithathu i-Axl ebhaliweyo yahlelwa ngenxa yokuba inkampani yokurekhoda yayicinga ukuba yenza ingoma inde kakhulu.
Ingoma yashaya # 1 eMelika ngoSeptemba 10, 1988, kwaye yahlala apho iiveki ezimbini. Ngelixa yayinyuka iye kwindawo ephezulu, iGuns N 'Roses yayikhenketha njengesiqalo sokuvula iAerosmith. Ukuphela kohambo ngoSeptemba 15, uG N 'R wayegqogqe iintloko zabo ngokuthandwa kwaye bakhethwa kwikhava Amatye agiqekayo kwiphepha labo likaNovemba 17.
Ukhenketho luhambe kakuhle kakhulu ngenxa yomgaqo womhlaba owenziwe yiAerosmith: akukho ziyobisi phambi kwabo. I-Aerosmith ehlaziyiweyo ngoku iyayibona i-Guns N 'Roses isihla ngendlela efanayo, kodwa ayenzanga nzame yokushumayela kubo malunga neengozi, njengoko besazi ukuba iGunners kuya kufuneka izenzele iimpazamo. I-Aerosmith yenza, nangona kunjalo, yanika i-T-shirts kwiqela elidwelise amaziko okuvuselela ababekhe bahamba kuwo endaweni yemihla yokhenketho, ababeziva ngathi yingxelo yabo.
Ingoma ityhila icala elibuthathaka uRose angakhange alibonise ngaphambili kwaye wenze njalo manqaphanqapha ukusukela: 'Uninzi lwamaqela ebhendi alula kakhulu ukuba angabinalo uluvo okanye naluphi na uvakalelo kuyo nayiphi na into yabo ngaphandle kokuba baneentlungu, utshilo uRose. ngelo xesha. '' Umntwana omnandi O 'Owam' yingoma yokuqala yothando endakha ndayibhala, kodwa andizange ndibenaye umntu wokubhala nantoni na ngaphambili. '
Kwividiyo, kwimizuzu embalwa ngaphambi kokuba uSlash ahambe yedwa, iAxl inokubonwa ikhulula ibhatyi. I-Axl yayineebhanti ezininzi ezingalweni zakhe, wayenengxaki yokukhulula ibhatyi yakhe, nto leyo eyabenza baphindaphinda. U-Axl wathi kudliwanondlebe ka-2006 no-Eddie Trunk, 'Ividiyo abafuna ukuyenza kule ngoma bekufanele ukuba yeyabafazi baseAsia abaphethe usana eMelika. Ekupheleni kwevidiyo, umntwana unqunyulwa evulekile kwaye kukho i-heroin ngaphakathi kuba yile nto ingoma.
Le ngoma ehlanganiswe kakhulu uSlash ebhalile. Uxelele iUK Imitha Iphepha-ndaba: 'Kukho ezinye iinguqulelo ezincomekayo zepiyano okanye ivayolin, kodwa ndothuswe zezinye iinguqulelo zomzobo. Ndihleli eofisini kagqirha ndicinga, 'Iyavakala loo nto,' kwaye emva koko ndiqonde ukuba kukutolika komntu ngento endiyibhalileyo. Ingangumbono ombi. '
U-Slash waqhekeza i-wah-wah pedal yegita yakhe yodwa, eyafika kwi # 3 Guitar Yehlabathi Uluhlu luka-2015 lwezona zixhobo zikhulu zexesha lonke.
Oku kuphumelele oBodwa oBodwa, oMninzi woMculo onzima / oLukhuni kuma-American Music Awards ka-1989. Iqela lenze 'Umonde' kumdlalo kunye noDon Henley behleli kumagubu eSteven Alder ogulayo.
Oku kwahlanganiswa kwaye kwagqitywa kwakhona e-UK ngoMeyi 1989, apho yaya kwi # 6. Xa yaqala ukukhutshwa apho ngo-Agasti 1988, yenza # 24.
USheryl Crow wagubungela oku ngo-1999 kumdlalo bhanyabhanya ka-Adam Sandler Utata Omkhulu , ufumene i # 30 hit e-UK kwaye wayizuzela ibhaso leGrammy yokuSebenza ngokuBalaseleyo kweVenkile yamaFazi ngo-2000. Inguqulelo yakhe ibonakala kufutshane embindini webhanyabhanya kanye emva kokuba bemkile umntwana; i-Guns N 'Roses yoqobo idlalwa ekugqibeleni kunye neekhredithi.
Ikatala yodwa ikwindawo ye # 37 kuyo Guitar Yehlabathi Uluhlu lwemagazini lwango-2013 lwee-100 ezinkulu zekatala zodwa ngalo lonke ixesha (uSlash's ' imvula kanovemba 'solo solo # 6).
Elliot -Toronto, Canada
Kudliwanondlebe kunye Uncut NgoFebruwari ka-2008 uSlash wabuzwa ukuba yeyiphi eyona ndawo ingummangaliso awakhe weva enye yeengoma zakhe. Uphendule wathi: Ndivile IsiXeko seParadesi 'kunye' Nomonde 'kwezinye iindawo ezingaqhelekanga, kodwa eyona nto ingumnqa kukuva iinguqulelo zikaMuzak ze' Sweet Child O 'Mine' kwizinyusi nakwiivenkile ezinkulu. Ndakhe ndeva nokuhlelelwa kwayo ngohadi. Kutshanje bendisehotele kwaye ipiyano yegumbi lokuphumla belilidlala. Ndifumana umxube weemvakalelo xa oko kusenzeka. Inxalenye yayo 'hey wow, leyo yingoma yethu!,' Enye yeentloni nokuba siyiqaphele, inxalenye yokuphazamiseka komnye umntu odlala umculo wakho, umntu ongazi nto ngawe, ongazange adibane nawe, olungileyo Ukudlala umculo wakho njengenxalenye yezinto eziliwaka ekufuneka bezidlalile. Khawufane ucinge ukuba uPaul McCartney uziva njani, xa esiva umculo wakhe yonke indawo.
Ngo-2008, uMbutho woRhwebo lokuRekhoda waseMelika wabhengeza Ukulangazelela ukutshatyalaliswa Eyona albhamu ithengwa kakhulu e-US eneekopi ezizizigidi ezili-18 ezithengisiweyo. Umnini werekhodi wangaphambili yayingu-Boston's 1976 ebizwa ngokuba yi-bt, eyayithengisa izigidi ezili-17.
Le ngoma idlala ngasekupheleni komdlalo bhanyabhanya ka-2008 Umqhubi weWrestler xa umlingiswa kaMickey Rourke engena kwisangqa. U-Axl Rose, ongumhlobo no-Rourke, wavumela ifilimu enebhajethi esezantsi ukuba ayisebenzise le ngoma phantse ayisiyonto, into uRourke ayibuleleyo i-Axl kumabhaso eGolden Globe xa waphumelela ukuSebenza ngokuBalaseleyo yiActor kwiMoto yoMdlalo-weDrama.
Ngo-2009, inguqulelo yejazz emnandi ethathwe yimithi, aka imvumi yaseSweden uVictoria Bergsman, yafikelela kwi # 23 e-UK ngenxa yokusetyenziswa kwayo kwintengiso yeTV kwivenkile yesebe uJohn Lewis.
Ingoma iqhuba u-5: 55 kwaye yakhutshwa ngeloxesha njengeyodwa, eyayilungile kwirediyo yomculo. Xa kwacaca ukuba le ngoma yayinomtsalane omkhulu we-pop, uGeffen Records wasasaza uguqulelo olunqunyuliweyo olusebenzisa u-3: 42 ngesinqumlo esinqunyiweyo kunye nekatala yesibini (emva kwendinyana yesibini) isusiwe. Le yayilukhetho olufanelekileyo kwizikhululo zikanomathotholo ezinabaphulaphuli ezaziza kulawula kuphela isiginkci somculo werock; Yayifumana ingoma emoyeni kububanzi beefomathi.
Ukuthetha nesikhululo sikanomathotholo WEBN eCincinnati, eOhio, uSlash uvumile ukuba akayithandi le ngoma ngaphandle kwe-riff yayo. Ucacisile: 'Uyazi, i-Guns N' Roses yayihlala ilukhuni ngokwenene, uhlobo lwe, AC / DC uhlobo lwebhendi elilukhuni elinesimo sengqondo esinzulu. Ukuba senze naluphi na uhlobo lweebhaladi, bekuluhlaza. Le yayiyi-ballad ye-uptempo. Enye yezinto ezinobungqingili onokuzibhala. Kodwa kwangaxeshanye, yingoma emnandi- andiyibethi- kodwa ngelo xesha, ibingadibani nayo yonke eyethu, isot of, schtick. Kwaye, ewe, iya kuba yeyona nto ibalulekileyo sakha sanayo. '
Ngo-Okthobha i-15, i-2019 le yaba yividiyo yomculo yokuqala ukusuka kwii-80s ukufikelela kwiibhiliyoni ezijongwa kwi-YouTube. Kunyaka ophelileyo, iqela ' imvula kanovemba Ikliphu nayo yaba yividiyo yokuqala ye-90s ukufikelela kwinqanaba lesigidi seqonga.
Inguqulelo yezixhobo ezisetyenzisiweyo kuthotho lokugqibela lwe- IOfisi Ngo-2013 xa uPhyllis kwakufuneka ephethe uAngela owenzakeleyo ezantsi ukuze aye kutshata noDwight.
akukho flegi imhlophe entla komnyango wam
ndigalele iswekile kum amazwi
hay usisi omncinci ngubani superman wakho
Akukho mntu waziyo ukuba kunjani ukuba ngumntu ombi
yiza nkosazana yam uyaphinda ubhabhathane lam